Chigadzirwa Inventory Vagadziri - China Chigadzirwa Inventory Vatengesi & Fekitori
Kuveza kweMabwe inzira yekuchenesa uye kutsanangura yakaoma marble echinyakare kune yekushongedza uye yehunyanzvi maitiro kana chimiro. Kufananidza neiyo Stainless simbi 3D zvidimbu kana chero zvimwe zvidimbu zve3D zvakagadzirwa nemakeramiki, girazi, mapurasitiki nezvimwewo, matombo echisikigo Zvigadzirwa zvakavezwa zvinokosheswa neyakajeka & echinyakare ficha. Nemakore ekuunganidzwa kwehunyanzvi hwehunyanzvi hwekugadzira hunyanzvi uchibatanidza zvazvino zveCNC tekinoroji kufambira mberi, zvigadzirwa zvedombo reCarvings zviri kuratidza kukwezva kwazvino uye kupenya kwaro kwekare.
Marble Inlay yakawedzera runako rwezvigadzirwa zvemarble. Kugadzira chimedu chakanakisa chemabhura inlay chigadzirwa, isu tinoda kutanga timu yemhando yepamusoro yekugadzira uye kushambadzira, rino ndiro danho rekutanga asi rakakosha. Chikwata chedu chakanyatsodzidziswa uye neruzivo tinoona kuti hatisi kungoisa kunze data kubva kumutengi, asi zvakare tinogadzira dhizaini, uye parizvino zvinopa kupa pikicha zvichibva pane dhizaini kuti uwane kusangana kwakanyanya kwemavara uye kudzamisa kubiridzira kuti itarisire inotarisirwa uye chigadzirwa chakajekeswa. Pfungwa yechipiri yakakosha ndeye CNC yemvura-jeti muchina. Muchina wemhando yepamusoro uye wakachengetedzwa mushe uri pamusoro pekupokana musimboti wakaoma musimboti wechigadzirwa chakanaka uye chakatsetseka Chechitatu, opareta wedu weCNC mvura-jeti anodzidziswa kwete chete mashandisiro emachina, asiwo akasiyana maitiro ematombo mhando. Ava vanoita basa, vane ruzivo rwakanyanya uye kunzwisisa kwebasa ravakatumwa ndivo varume vakakosha vechigadzirwa chakakwana. Nezve marble inlay, ech sarudzo yematombo kuverenga, yega milimetre kuverenga yemhedzisiro mhedzisiro.
Marble mosaic inogona kuteverwa kumashure zviuru zvemakore zvakapfuura munhoroondo yekushongedza kwevanhu. Basa rayo ndiko kuwedzera kwekufungidzira kwevanhu. Inogona kuve yakajeka seyemusikana; inogona kunge yakajairika sezera repasi; uye inogona kunge isina kusimba semufananidzo waDa Vinci. Kufamba kubva panguva yechinyakare kuenda kuzera remazuva ano, inopfuura nhaka yetsika dzevanhu nemweya, uye mazuva ano, ichiri chimwe chechigadzirwa chinonamatwa nevakagadziri nevashandisi vekupedzisira.
Kuveza kweMabwe inzira yekuchenesa uye kutsanangura yakaoma marble echinyakare kune yekushongedza uye yehunyanzvi chimiro. Uchienzanisa neyazvino Stainless simbi 3D zvidimbu kana chero zvimwe zvidimbu zve3D zvakagadzirwa nemakeramiki, girazi, mapurasitiki nezvimwe, zvigadzirwa zvematombo zvakavezwa zvigadzirwa zvinokosheswa neyakajeka & echinyakare pfungwa. Nemakore ane chiuru chekuunganidzwa kwehunyanzvi hwehunyanzvi hwemaoko kusanganisa kufambira mberi kwetekinoroji, zvigadzirwa zvematombo zveCarvings zviri kuratidza kukwezva kwazvino uye kupenya kwaro kwekare.